Puntland oo Bandow ku soo rogtey magaalooyinka waaweyn
GAROWE - Kulan degdeg ah oo maalintii shaley 29/03/2020 isugu yimaadeen Madaxweynaha, golihiisa wasiirada, taliye-yaasha ciidamada iyo la taliyaasha amniga ayaa waxaa ka soo baxey labo iyo toban qodob oo lagaga hortagayo faafida cudurka Coronavirus.
Shirkaan oo uu shir gudoominayey Madaxweyne Siciid Cabdulahi Dani ayaa lagaga hadlay sidii loo joojin lahaa faafida cudurka faraha ba'an ku haya adunka COVID-19 iyadoo talooyin kala duwan laga dhageystey hay'adaha kala duwann ee dowlada.
Warsaxafadeed ka soo baxey xafiiska Madaxweynaha ayaa waxaa dhamaan lagu jooiyey dhaqdhaqaaqa dadka inta u dhaxeysa Lixda Makhribnimo iyo Shanta aroornimo April 1-April 15 iyadoo dhamaan la xanibay isu-imaatanka dadweynaha iyo isu socodka gadiidka qaada shacabka kuwaas u kala socda magaalooyinka waaweyn ee Puntland muddo Shan iyo toban cisho ah.
Dhinaca kale waxaa amar lagu soo saarey in lagu gubo hadii lagu arko magaalooyinka gudahooda Qaadka iyadoo in muddo ah dhinaca lugta ah mandooriyahaan ku soo galayey Puntland isagoo maalmihii ugu dambeeyey ka imaanayey dalka Itoobiya.
Qodobada shirkaan ka soo baxey oo lagu faafiyey bogga Madaxtooyada Puntland ku leedahay barta Facebook ayaa u qoraa sidatan:
Xakameynta Covid-19 oo dhibaato u keentay Muslimiinta Hindiya
Caalamka 20.04.2020. 01:04
Bandowga wadankaas lagu soo rogay ayaa bil-jirsadey xili tirada kiisaska ay sii kordhayaan.
Dhakhtar caan ah oo u dhintey cudurka Coronovirus
Caalamka 07.04.2020. 14:46
"Qof kasoo horjeestay" shuruucda xakameynta Covid-19 oo la toogtay
Caalamka 05.04.2020. 13:40
WHO oo ku dhawaaqdey in Coronavirus yahay cudur faafaya
Caalamka 12.03.2020. 05:49
DF oo hirgelineysa xarun lagu karan-tiilo dadka laga helo Coronovirus
Soomaliya 04.03.2020. 17:00
In ka badan 20 Xildhibaan oo laga helay cudurka Coronavirus
Caalamka 03.03.2020. 15:44
Soomaaliya oo lagu daray liiska dalalka "uu aafeeyay" Coronovirus
Soomaliya 27.02.2020. 19:00
Soomaaliya oo ka feejigan Ebola oo lug lasoo galey bariga Afrika
Soomaliya 16.06.2019. 19:01
Madaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay geerida Cabdi Tahliil Warsame 05.06.2020. 14:55